Kud ka guur oo qanjo u guur - BBC News Somali
Image caption Qaar ka mid ah dadka ku barakacay Soomaaliya
Qoysas barkacayaal ah oo halkii ay u qaxeen kala kulmay faraxumayn aan la filayn.
Waa run oo waa loo dedaalay inta badan boqolaalkii kun ee ku soo barakacy abaarihii Somalia. Waxa magaalada Muqdishu looga furay xerada Badbaado, halkaasi oo loogu sameeyo quudin iyo adeegyo kale oo caafimaad.
Qoyska Amina Ibrahim
Laakiin maxay ku danbeysey Amina Ibrahim iyo qoyskeedii? Amina waa haweeney 25 jir ah, waxayna iyada iyo qoyskeedu ka soo barakaaceen gobolka Shabeellada Hoose. Waxay soo gaadheen xerada Badbaado ee Muqdishu.
Nasiibdarro, xilli habeen bar ah 13kii bisha Oktoobar ayaa nin rabay in uu kufsado Amina uu soo weeraray iyada iyo qoyskeedii. Waxa uu ku furay rasaas, waxaana labo xabadood ay kaga dhacday Amina lugta bidix. Waxaana uu ku bilaabay in uu faraxumeeyo. Waxaa u falkani ku kacay ninkaasi hubaysnaa iyada oo ay u jeedaan ninkii qabey Amina iyo weliba waalidkeedii qaar ka mid ah.
Amina seygeeda ayaa isaguna ku dhaawacmay weerarka qoykiisa uu ku soo qaaday ninka hubeysani.
Dagaal dhex maray Amina seygeeda iyo ninkii hubaysnaa ayaa ugu danbeyn waxa u suuragashay in ninkii hubeysnaa ay qabtaan, waxaana u soo gurmaday reerihii jaarka kula ahaa xeradii ay ku soo barakaceen oo ku taalla dhulkii safaaradda Maraykanka ee degmada Madiina.
Waxa uu noqday askari ka tirsan askartii dawladda ee loo diray inuu ilaaliyo babaadada iyo daryeelka nabadgelyada dadka barakacayaasha ee ku jira xerada Badbaado.
Sida uu soo sheegay weriyaha BBC Maxamed Ibraahim Macalimuu oo tegey goobtaasi ka bacdi markii uu falkani dhacay, wuxu soo sheegay in Amina kolkii uu dhaawacu soo gaaray loola cararay cisbitaal Madiina oo u dhawaa, hase ahaatee dhaawaca haweeneyda oo cuslaa awgeed ayay dhakhaatiirtu ku taliyeen in Amina laga jarayo lugta bidix inta ka hooseysa jilibka.
Arrintan waxa ay u cuntami weyday qoyskii haweeneyda, waxayna goosteen in aqalkooda ay u celiyaan Amina, haddii lugta laga jarayo. Muddo toddobaad ah ayay Amina dhex tiiley aqalkoodii bacaha ka sameynaa waxaana ku sii siyaaday caabuqii lugta ilaa ay uga ekaato madow.
Labo dhakhtar oo Soomaaliyeed ayaa ka warhelay xaaladda dhaawaca haweeneyda la kufsaday ee haddana dhaawaceedii aqalka lagu celiyay,. Waxa ay u tageen reerkii si ay ugu qanciyaan in gabadha cisbitalkeeda lagu celiyo iyaga oo u sheegay in gabadha nafteedu ay halis ku jirta haddii aan la raacin talada dhakhaatiirtu bixiyeen.
Reerkii way ku sii adkeysteen, laakiin saacado badan oo wadahadal ka dib ayaa waxa reerka laga dhaadhiciyay in cisbital hor leh la geynayo, wixii dhaqaatiirtu ay yiraahdaana ay haboon tahay in la raaco. Waxa haweeneydii iyo dhakhaatiirtii ay wada tageen cisbital Keydsaneey. Dhakhaatiirta cisbitaalkaasi markii ay eegeen kama ay maagmaagin ee waxa ay ku taliyeen in lugta deg deg loo jarayo si haweeneyda loo badbaadiyo, reerkiina kuma qancin go'aankaasi balse caqli celin iyo waano badan ka dib waa ay ogaalaadeen.
Amina hadda waxa ay ku jirtaa cisbitaal Keydsaney, xaaladeeduna aad ayay u soo roonaanaysaa. Haatan waa ay sheekeyneysaa oo mararka qaar isku deyeysaa inay qososho, laakiin waxa ku dhaca qosol-gariir, kolka ay dib u eegto dhacdadii la soo gudboonaatayna way is-ciilkaambinaysaa oo murugooneysaa.
Dhacdadani ma ahayn mid kelideeda ah oo hor leh - waa dhacdadii afraad ee nooceeda ah ee ka dhacday isla magaalada Muqdishu. Laakiin kuwii ka horreeyey laguma guulaysan in la soo qabto askartii geysatey faraxumaynta. Waxa dhici karta kuwa la mid ah oo ku dhacay qoysas kale, amma ka dhacay meelo kale intii uu socdey qaxani. Horraantii barakacani, isla Muqdishu waxa ka dhacay dil ka yimid askar la sheegay inay boobayeen raashinkii gargaarka.
Dhinaca kale dhacdoyinkani macnaheedu ma aha in barakacayaashii soo qaxay aan loo samayn gurmad iyo daryeel ah - intooda badan waxa loo helay raashin, hoy, adeegyo caafimaad, iyo xataa waxbarasho caruurta xerooyinka qaar, iyo adeegyo kale oo ku-meel-gaadh ah.
Laakiin dhacdooyinkan u danbeeyey waxay tusaale u yihiin nasiib darrada la soo gudboonaan karta qoysas badan.